မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကိုင်ကြည့်ပါ။ ASOS နဲ့ COLLECTPLUS ကအဲဒီနေ့မှာပဲလုပ်နေတယ်။ CLICK & COLLECT TO THE SU !!! - သတင်း
မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကိုင်ကြည့်ပါ။ ASOS နဲ့ CollectPlus ကအဲဒီနေ့မှာပဲလုပ်နေတယ်။ Click & Collect to the SU !!!
ဟုတ်ပါတယ်၊ ခေါင်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ဖတ်ပြီးပြီ။ ASOS ရဲ့အိပ်မက်တွေတကယ်တော့ပြည့်စုံလာပြီ။ ယခု ASOS Instant နှင့် CollectPlus နှင့်အတူ၊ သင်တနင်္ဂနွေနေ့ည ၁၂ နာရီမတိုင်မီသင်မှာယူပါကညနေ ၅း၇ နာရီအကြား SU Pop-Up ဆိုင်မှသင်၏အမှတ်တရပစ္စည်းများကိုကောက်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ သောကြာနေ့မနက်မှာမှာထားပါ၊ Fruity အတွက်အချိန်တိုအတွင်းသင်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ဗီရို၊ ကြမ်းပြင် - Drobe၊ သင့်အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့အဝတ်လျှော်ခြင်းတောင်းကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းပြီးပြီဆိုရင် နေတုန်းပဲ Mischief အတွက် VK မပါသောစကတ်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည် - ASOS Instant သင်ဖုံးထားပါသည်။ ၎င်းသည် standard ဖောက်သည်များအတွက်ပေါင် ၂.၉၅ ဖြစ်ပြီး ASOS Premier ရှိသူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ချောထုပ်ကိုကလစ် နှိပ်၍ စုဆောင်းရန် SU သို့သွားပါ။ လွယ်ကူပါတယ်။
CollectPlus နှင့်အတူတူပင် ASOS လက်ငင်းပေးပို့မှုကိုရယူပါ၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
ထို့အပြင် ASOS စွဲသူများအားမမေ့ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင်ဖမ်းယူနိုင်သည့်နောက်ဆုံးမိနစ်မျှသာမဟုတ်ပါ ။ မင်းရဲ့ ၀ တ်စုံကိုတကယ်ပေါ်ထွန်းစေမယ့်မျက်လုံးအရိပ်အသစ်လိုချင်လား? သင်တစ် ဦး တည်းနှောင်းပိုင်းတွင်ငါ - ဖြစ်နိုင် - ရှိသည် - kinda- မေ့လျော့ - သင့်ရဲ့မွေးနေ့ prezzie အိမ်ရှင်မတစ် ဦး ကိုဝယ်ခြင်းငှါလိုအပ်ပါတယ်? ဒါမှမဟုတ်အိမ်တွင်းပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပပြီးသင်ကူရှင်အခြို့အစားထိုးဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သင်လိုအပ်သည့်အရာ၊ CollectPlus နှင့်အတူလက်ငင်း ASOS Instant သည်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီရယူပါလိမ့်မည်။
ကိုယ့်ရည်းစား porn ကိုချောင်းမြောင်းကြောင့်ရူးသွပ်ဖြစ်သင့်
လိဒ် BNOC Marj Moore က, @ marj.moore , ချစ်သောသူ - CollectPlus အကြွင်းမဲ့အာဏာဂိမ်း changer! ငါနောက်ဆုံးညမိနစ်ပိုင်းအ ၀ တ်အစားလိုချင်တယ်၊ အဲ့ဒီနေ့ကိုပဲ Uni ကိုပြန်ပို့နိုင်ပြီ။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
ဒီဟာတကယ့်ကိုဂိမ်းလဲလှယ်သူဖြစ်တော့မယ်။ ငါ Hallelujah ရနိုင်မလား?!
CollectPlus နှင့် ASOS Instant ကို အသုံးပြု၍ သင်သည်တစ်နေ့တည်းအတွက် SU သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်